Namoaka io baiko io ho amin’ny fampahafantarana indray ny aro lozan’ny fifamoivoizana ny lehiben’ny fari-piadidian’ny Zandarimaria-pirenena any an-toerana, Hermelan Serge Razafindrakoto, ny 18 aogositra teo. Tsikaritra tato ho ato fa nahazo vahana ny lozam-pitaterana an-tanety ary sorohana hatrany izany izay be mpitranga amin’ny vanim-potoana mahabe olona toy izao. Efa manomboka mitombo isa ireo mpandeha mivezivezy manerana ny Nosy amin’izao main-tany izay fanatanterahana ny lanonam-pianakaviana sy ny famadihana ary ny fialantsasatra izao.
Ankoatra ireo toromarika ho an’ny sivily, nampatsiahy ny fitsipi-pitondrantenan’ny mpitandro filaminana ihany koa ity Lehibem-pibaikoana ny CIRGN ity amin’ny fisorohana ny herisetra sy ny kolikoly. Ho hentitra amin’ny fampiharana ny lalàna sy ny fitsipi-pifehezana ireo manampahefana aorian’izao fanentanana izao, voalaza mihitsy aza ny ho fandroahana sy ny hofamonjana ho an’ireo mpandika lalàna. Ny kolikoly izay manarona ny olana ara-teknika sy mekanika ary ara-taratasy maro an’ny fiara matetika no anisan’ny fototry ny loza eto Madagasikara.